Microsoft chọrọ ịgbatị eBPF nke kernel Linux maka Windows | Site na Linux
Mgbe Windows Subsystem maka Linux (WSL), nke ndị ọrụ dị iche iche nke sistemụ arụmọrụ nabatara nke ọma, Microsoft kpebiri ịgbaziri teknụzụ ọzọ dị mkpa site na obodo Linux, eBPF (Berkeley Extended Packet Filter) ma weta ya na Windows.
Ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ọ gaghị abụ ndụdụ nke eBPF, Ee, a ga-eji nke a rụọ ọrụ ndị dị ugbu a, gụnyere ọrụ IOVisor uBPF na onye nyocha PREVAIL, iji mee eBPF API na mmemme na sistemụ arụmọrụ nke ha, gụnyere Windows 10 na Windows Server 2016 (ma ọ bụ karịa).
N'ime afọ ise gara aga, Microsoft, nke na-amalite na narị afọ iri a ka na-ahụ Linux dị ka ọrịa kansa nke ụlọ ọrụ kọmputa, abụrụla otu n'ime ndị kachasị nyere aka na mmepe kernel.
Na WSL, o meghere ụzọ maka ọtụtụ ngwa na Windows, na-ekwe ka ndị nchịkwa sistemụ na ndị mmemme iji ngwaọrụ Linux na ọrụ Linux sitere na Windows na-enweghị ihe ọ bụla ọzọ ma ọ bụ wuo usoro ihe mgbagwoju anya.
Ugbu a Microsoft na-ahọrọ ịgbakwunye eBPF na Windows, dị ka Nke a bụ teknụzụ a maara nke ọma maka mmemme ya na agility, ọkachasị ịgbatị kernel nke sistemụ arụmọrụ, maka iji ihe dịka nchebe megide mwakpo DoS na nlebara anya.
Ọ bụ a dabeere na ndekọ dabeere mebere igwe Ezubere iji gbaa na 64-bit omenala RISC ije site na JIT chịkọtara na Linux kernel. Ka o siri dị, mmemme eBPF dabara nke ọma maka mwepu sistemu na nyocha, dị ka nlekota usoro faịlụ na ịkpọ oku.
eBPF na - anọchite anya otu ihe kachasị ọhụrụ n'ime kernel nke afọ iri gara aga. Ebe ọ bụ na enwere mmasị ụfọdụ na ịmegharị teknụzụ na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ, Microsoft kpebiri ịnwale sọftụwia Windows. Ihe oru ngo a, nke a na-akpọ ebpf-for-windows, bụ ihe mepere emepe ma dị na GitHub.
"Ebpf-for-windows project bu ka enyere ndi mmepe aka iji ngwa oru eBPF a ma ama na ngwa mmemme (APIs) na udiri Windows ndia," ka Dave Thaler kowara na post a blog Monday, Microsoft Associate Software Engineer, na Poorna Gaddehosur, Onye Injinia Software nke Microsoft.
"Dabere na ọrụ ndị ọzọ, ọrụ a na-ewe ọtụtụ ọrụ mmeghe eBPF dị ugbu a ma na-agbakwunye akwa etiti iji na-agba ọsọ n'elu Windows."
Companylọ ọrụ anaghị akpọ ya eBPF ndụdụ. Ya mere, ndị mmepe Windows ga - enwe ike iji ngwa ọrụ dịka clang iji mepụta koodu byte.
eBPF nke koodu ntinye nke enwere ike itinye n'ime ngwa ọ bụla ma ọ bụ jiri ya na akara Windows netsh. Dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, a na-eme nke a site na ọbá akwụkwọ na-emekọrịta ihe nke na-eji Libbpf API.
Ọba akwụkwọ ahụ gafere EBPF bytecode site na PREVAIL na gburugburu ebe nchekwa Windows na-enye ohere ka akụkụ kernel tụkwasị obi daemon onye ọrụ-ejiri akara igodo tụkwasịrị obi.
Ndị injinia Microsoft na-ekwu na ọrụ a bụ iji nye nkwado maka eBPF koodu site na iji nko na ndị enyemaka dị na Linux na Windows.
"Linux na-enye ọtụtụ njikọ na ndị enyemaka, ụfọdụ n'ime ha bụ Linux akọwapụtara nke ọma (iji usoro Linux data dị n'ime, dịka ọmụmaatụ) nke agaghị adabara na nyiwe ndị ọzọ," ka ha kwuru.
Finalmente Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ. Ọ bụ ezie na ndị nwere mmasị ilebanye anya na ebe nchekwa eBPF dị na GitHub, ha nwere ike ime ya site na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Microsoft chọrọ ịgbatị eBPF site na Linux kernel na Windows